FBA Transfer any ivelany any FBA - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
Ankehitriny maro amin'ireo trano fanatobiana entana any Etazonia no hanome famindrana ho an'ny serivisy fitehirizam-bokatra any ivelany any Amazon. Raha ampitahaina amin'ny fitaterana mivantana any amin'ny trano fivarotana any ivelany any Amazon any Etazonia, ny fivezivezena dia afaka manampy ny mpivarotra hitahiry ny vidin'ny fitaterana sasany, hanatsara ny fahombiazan'ny famenoana ary hanatsara ny hafainganan'ny fandefasana vokatra. , ity manaraka ity dia hampahafantarina anao.
Fomba famindrana any amin'ny Amazon Overseas Warehouse any Etazonia:
Voalohany, ny mpivarotra dia tsy maintsy mandefa ireo entana avy any amin'ny firenena mankany amin'ny trano fanatobiana entana voatokana any Etazonia. Ny trano fanatobiana entana any ivelany any Etazonia dia hanome serivisy fampifanarahana trano fitehirizana, mba tsy hikitikitika ny orinasam-pitaovana ny mpivarotra. Rehefa avy nahazo ny entana tamin'ny mpivarotra ny trano fanatobiana entana any ivelany dia hamaha, hanisa, hanoratra ary hametraka azy ireo eo amin'ny talantalana, ary avy eo hampifanaraka ny fampahalalana momba ny lisitr'ireo vokatra amin'ny mpivarotra. Rehefa mila famenoana ny Amazon Overseas Warehouse dia nampandrenesin'ny mpivarotra ny Overseas Warehouse, ary avy eo ny entana dia ho fonosina, hosoratana ary halefa any amin'ny trano fitehirizan-tany Amazon voatondro arak'izay takian'ny mpivarotra.
Ohatrinona ny vidin'ny famindrana any amin'ny Amazon Overseas Warehouse?
1. Mpitondra entana: ny sandan'ny mpivarotra hitaterana ny entana any Etazonia amin'ny alàlan'ny orinasa lozisialy. Ny vidin'ny fandefasana dia tsy mitovy amin'ny an'ny entam-barotra. Amin'ny ankapobeny, ny vidin'ny fandefasana ranomasina dia ambany kokoa.
2. Ny saram-pitantanana: Ny ankamaroan'ny vola dia ilazana ny fandaniam-bola amin'ny fitehirizana entana any ivelany any Etazonia, toy ny lisitra, ny fitahirizana, ny rafitra fampidirana sns, ary hisy ny saram-pitantanana ho an'ny entana ivelan'ny trano fitehirizana.
3. Saran'ny fitehirizana: ny trano fitobiana any ivelany dia handoa vola amin'ny mpivarotra vola isam-bolana. Amin'ny ankapobeny, ny vidiny dia isaina araka ny faritra sy ny lanjan'ireo entana. Ny fenitra famerana manokana dia tokony horesahina amin'ny orinasa fanatobiana entana any ivelany.
4. Fandefasana entana: rehefa mibaiko ny mpividy, ny trano fanatobiana entana any ivelany dia handamina ny fanaterana ny vokatra sy ny fitaterana, amin'ny alàlan'ny ekipan'izy ireo manokana na avy amin'ny orinasam-pitaovana eo an-toerana handefasana azy, ny mpivarotra dia takiana mba handoa sarany fandefasana.
Amin'izao fotoana izao, trano fanatobiana entana any ivelany maro any Etazonia no hanome ny serivisy famindrana any amin'ny trano fitehirizam-bokin'i Amazon any ivelany. Hamarininay indrindra raha mety amin'ny mpampiasa ny mamindra ny serivisy arakaraka ny toe-javatra misy antsika manokana. Satria ny famindrana dia hiteraka saram-panompoana sasany, nefa koa mety hamokatra backlog inventory sy toe-javatra hafa; Fa koa araka ny serivisy fitobiana any ivelany, ny vidiny sy ny lafiny hafa hisafidianana trano fitehirizana any ivelany mety.
Raha misy zavatra mahaliana anao dia aza misy ifandraisany amiko ny telefaoniko: +86 17322126273.